‘केपी ओलीको भूमिका अब सिद्दियो’, राजनितीबाट सन्यास लिनुपर्छ : खनाल - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
‘केपी ओलीको भूमिका अब सिद्दियो’, राजनितीबाट सन्यास लिनुपर्छ : खनाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपाली राजनीतिमा अब केपी शर्मा ओलीको कुनै भूमिका नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले एमसीसीका केही प्रावधानहरु सच्याएरमात्रै यसलाई अघि बढाउन सकिने धारणा राखेका छन् । प्रस्तुत छ नेता खनालसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पछिल्लो निर्वाचनमा नेकपाले प्राप्त गरेको दूई तिहाइको बहुमत पनि दुईवटा पार्टीले लिएको हो । त्यसैले यो गठबन्धन चाहीँ गर्ने, तर संस्कृति चाहीँ विकास नगर्ने । कुनै एउटा ब्यक्ति शक्तिमा पुग्यो भने सबै आफुले हालीमुहाली गर्ने, एक्लै मनपरीतन्त्र चलाउने यसले गर्दा समस्या देखिएको हो ।
अब अहिले हामीले फेरी गठबन्धन गरेका छौं, मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि पटक–पटक भनिरहेको छु । उहाँले चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुपर्छ ।
जुन वस्तुगत परिस्थतिले यो गठबन्धनलाई जन्माएको छ । त्यो वस्तुगत परिस्थिति अहिले पनि बिद्यमान छ । त्यसैले बस्तुगत परिस्थितिमै बदलाव आयो भने गठबन्धनहरु फेरी टुट्छन्, अनि फेरी बन्छन् । तर, अहिलेको अवस्थामा त्यो गठबन्धन टुट्ने आधार छैन ।
अब अरु पार्टीमा आफ्ना–आफ्ना खालका सिमा र भिन्नता त जहिले पनि हुन्छन् । त्यो ठुलो कुरा होइन । त्यसलाई म्यानेज गरेर, एउटा कमन ग्राउन्डमा उभिएर अगाडी बढ्न सक्नुपर्छ त्यसलेमात्रै यो देशलाई अग्रगतितर्फ लान्छ ।
नेकपा (एमाले) नामको पार्टी, जो हामीले रगत÷पसिना बगाएर, त्याग र बलिदान गरेर लामो समय लगाएर बनाएको पार्टी हो । नवौं महाधिवेशनदेखि केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व कब्जा गरेका छन् ।
Aउनको नेतृत्व निरंकुशतावादी, दक्षिणपन्थी, अवसरवादी, गुटवादी, अहंकारवादी र व्यक्तिवादी बनेको छ । सत्तामा पुगेपछि त्यो निरंकुशतावादी भयो । सत्ताबाट बारिर फ्याकियो, अहिले अराजकवादी भएको छ । त्यसले न सरकारमा हुँदाखेरी देशलाई अग्रगतितर्फ जाने काम गर्यो अहिले प्रतिपक्षमा हुँदा संसद्लाई नै चल्न नदिने काम गरेको छ ।
किनभने यो संसद् त उहाँले दुईपटक बिघटन गरेको संसद् हो । यो संसद्ले उहाँका निजी हितमा काम गरेन । निजी हितमा काम नगरेर देशको हितमा काम गर्दाखेरी उहाँले संसद्लाई निमोठेको हो । अब अहिले त्यसरी निमोठेको संसद् पुनःस्थापित् भएको उहाँले हेर्न सक्नुभएको छैन् । त्यसलेगर्दा संसद्मा कुनै कुराहरु अगाडि बढ्न नदिने देशलाई अराजकतातिर लाने, सभामुखविरुद्ध बिभिन्न सांसदहरुले गरेको व्यबहार मैले देखिरहेको छु ।
त्यसले हिजो पञ्चायतकालको मन्डलेको सम्झना गराउँछ । त्यो मण्डले प्रवृत्ति हो । एउटा मर्यादित सांसदले त्यस्तो काम गर्न सक्दैन । यस्ताखालका हर्कतहरु, जो अहिले देखापरेका छन् । त्यसले नेकपा (एमाले) को नेतृत्व बिल्कुलै अधपतित भएर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरु सबै गुमाउदै गएको कुरा पुष्टि गर्छ ।
होइन, सभामुखले एउटा पार्टीको भिक्टीम भएरपनि त जान सकिँदैन नि त । सभामुखले सबै पार्टीलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ । तर, संसद् सञ्चालन गर्ने कुरामा सबैको न्युनतम कोअप्रेसन पनि त हुनपर्यो नी । पार्टीहरुका बीचमा भिन्नता छन् । त्यो कुरा संसदमा राख्नुपर्यो नी होइन र ? संसद्मा बहस हुनुपर्यो, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनपर्यो ।
अनि संसद्लाई बन्धक बनाएर बोल्नै नदिने, कार्यक्रमहरु अघि बढ्नै नदिने गरेपछि निरंकुशताको अर्को रुप होइन यो ? त्यसकारणले यस्ता कुरालाई कन्ट्रोल गर्न सभामुखले भूमिका खेल्नैपर्छ । अहिले सभमुखले जे भूमिका खेलिरहनुभएको छ, त्यसमा म धेरै ठुलो कम्जोरी देख्दिन् । तर त्यसमा पनि एक–आपसमा राम्रोसँग बसेर यस्तो हुनुपर्ने, यो भएन भनेर छलफल गरेर जानुपर्छ नी ।
अहिले जुनखालका मुद्दा उहाँहरुले उठाउनुभएको छ । त्यो मुद्दा अहिले अदालतमा रहेको छ । अदालतको विचाराधीन मुद्दामा विश्वका कुनैपनि संसद्मा छलफल हुँदैन । नेकपा (एमाले) जस्तो पार्टीले यी कुरा त बुझनुपर्ने हो नि त । हामी त्यो पार्टीमा हुँदा यो मर्यादालाई कहिलेपनि भुलेका थिएनौं । तर, केपी ओलीले सारा मर्यादाहरुलाई कुल्चदै जानुभएको छ । साथै, आफ्ना समर्थकहरुलाई त्यही ढंगले प्रशिक्षित गर्ने र अमर्यादित तरिकाले सांसदहरुलाई पेश गर्ने जुन प्रकारका कामहरु गरिरहनुभएको छ ।
यस्ता कुराले राष्ट्रलाई अग्रगतितर्फ लग्न सकिँदैन । हामीले २०४६ सालदेखि संसद्मा धेरैपटक प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्दै आयौं । कहिलेकाहीँ हामीहरुबाट माईक भाँच्नेजस्ता कामहरु पनि भए । तर, हामीले त्यस्ता कुराहरुबाट सिकेर कसरी मर्यादित तरिकाले संसद्मा काम गर्ने भन्ने कुरा सिकेर रचनात्मक रुपमा काम गर्ने गर्दै जनतालाई आफ्ना कुराहरु सुनाउदै आयौं । त्यसकारण नेकपा (एमाले) एउटा राम्रो पार्टीको रुपमा स्थापित भएको थियो । त्यस्तो पार्टीलाई केपी ओलीले सिध्याउने काम गर्नुभएको छ ।
केपी ओलीको भूमिका अब सिद्दियो । दुई तिहाइको बहुमत दिएर जनताले केपी ओलीलाई जुन ढंगको अख्तियारी दिएका थिए । साथै, पार्टीले पनि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, त्यसलाई उहाँले सम्हाल्न सक्नुभएन । उहाँ एउटा असफल र विवेकहीन नेताको रुपमा आफैं आउनुभएको छ । अब उहाँले गर्ने कुनैपनि कामले यो देश अगाडि बढ्दैन । कम्युनिष्ट आन्दोलन अगाडि बढ्दैन् । त्यसकारणले उहाँले कुनैपनि हालतमा पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर युवाहरुलाई पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन् ।
नेपालको पूर्वाधारको विकास गर्न मैले ५०० अर्ब अमेरिकाबाट ल्याउने निर्णय गरिसकें भनेर जनतालाई ढाँट्ने ? कहाँ गयो ५०० अर्ब ? नेपाली जनताले खोज्नेछन् । त्यसैले नेपाली जनतालाई ठग्ने जुन किसिमको काम उहाँले गर्नुभएको छ, त्यस्ता झुँटा कुराले अब चल्दैन ।
अब एमालेभित्र बिद्रोह सुरु भएको छ । देशभरका कम्युनिष्ट युवाहरु एक भएर समाजवादको दिशामा अघि बढ्ने छन् । त्यस्तो पार्टी निर्माणको थालनी भइसकेको छ ।
म अवसरवादी चाहनाले जान चाहान्नँ । कतिबेला कस्तो नीति लिंदा आफ्नो हित हुन्छ भन्नेतिर म लाग्दैन् । त्यो एमसीसी भनेको के हो यसले राष्ट्रको हित हुन्छ की हुँदैन् ? यो कुरालाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । नेकपा (एमाले) को कालमै एउटा कार्यदल बनाएको थियो ।
त्यो कार्यदलको प्रमुख म नै थिएँ । त्यो कार्यदलले जुन रिपोर्ट दियो, त्यो रिर्पोट मैले पटक–पटक पार्टीा छलफल गरौं भनें तर केपी ओलीले अहिलेसम्म त्यसलाई छलफल गर्ने काममा ध्यान दिन सक्नुभएन । त्यसैले त्यो कार्यदलले भनेको कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
एमसीसीमा जुनखालका बुँदाहरु राखिएको छ, ती बुँदा देशको हितमा छैनन् । हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्याउने खालका केही शर्तहरु त्यहाँ छन् ।
त्यस्ता कुरालाई नसच्चाएर हामीले कसरी अगाडि बढ्न सक्छौ ? मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता केही शर्तहरुलाई नसच्चाएर पास गर्नुहुँदैन पहिलो कुरा । अनि, दोस्रो कुरा अनुमोदन गर्नैपर्ने जुन प्रावधान राखियो यसमा पनि मेरो आपत्ति रहेको छ ।
यस्ता सम्झौताहरु सबैभन्दा पहिले देशको अनुकुल गर्नुपर्छ । यो एमसीसी सम्झौता गर्ने शिलशिलामा अनेक गोप्य सम्झौताहरु भएका छन्, जुन सम्झौताका सबै कपी अहिलेसम्म हाम्रो संसद्लाई थाहा छैन् । हामीहरुले समेत सबै डकुमेन्ट पाएका छैनौं ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग हामीले यी डकुमेन्टहरु मागेका थियौं । तर, हामीले पाउन सकेनौं । यस्ता सबै कुरा हामीले प्राप्त नगरेर कसरी निश्कर्षमा पुग्ने ?